Pcb Assembly Samples Vagadziri - China Pcb Assembly Samples Vatengesi & Fekitori
Kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemagetsi zvitsva zvakakwana zvisati zvatanga kumusika, isu tichafanirwa kuyedza prototypes pamberi pekugadzirwa kwakawanda. Pcb inogadzira uye pcb gungano anodiwa maitiro e prototype turnkey pcb yekugadzira. Iyo prototype PCB gungano inoshandiswa kuyedza inoshanda, saka mainjiniya anogona kugona dhizaini nekugadzirisa zvimwe zvipembenene. Dzimwe nguva zvinogona kuda 2-3 nguva, uye kutsvaga yakavimbika magetsi gadzira inogadzira yakakosha zvikuru.
Flexible pcb, inozivikanwawo seyakajairika zvemagetsi, inoshanduka wedunhu bhodhi, Flex pcb, inoshanduka maseketi, imhando yegungano remagetsi nekumisikidza zvigadzirwa zvemagetsi pane inochinjika epurasitiki substrate yakadai sepolyimide, PEEK kana yakajeka transparent polyester firimu. Uye zvakare, iyo inoshanduka maseketi inogona kunge iri skrini yakadhindwa sirivha redunhu pane polyester.
Yedu pcb Assembly kugona inokwanisa kupa vatengi vedu mukana we "One Stop PCB Solution" kune yavo PCB nhema uye Assembly zvinoda. Hunyanzvi hwedu hunosanganisira Surface Mount (SMT), Thru-hole, Mixed Technology (SMT & Thru-hole), Yakaroora kana Ruviri Sided Kuiswa, Fine Pitch Zvikamu, uye nezvimwe.
PcbFuture yakazvipira kupa mhando yepamusoro uye nehupfumi pcb yekugadzira uye Imwe yekumira pcb musangano webasa kune vese vatengi venyika. Kubva kukurumidza-kutendeuka prototyping, yakaderera vhoriyamu yakakwira musanganiswa kune yakakwira vhoriyamu kugadzirwa, isu tinogara tichifunga kuti yepamusoro mhando, panguva yekuendesa nguva, yemakwikwi mutengo uye isina chaicho basa ndiyo chete nzira yekukunda kutendeka kwako. Izvi zvinokutendera iwe, mutengi anokudzwa, kuti utarise pane rako rekutanga bhizinesi uine chokwadi chekuti zvaunoda zviri mumaoko akachengeteka uye ane hunyanzvi.
PCBFuture inotarisana nekupa vatengi nemhando yepamusoro inokurumidza kutendeuka pcb yekugadzira masevhisi uye nekukurumidza uye nenguva yekuendesa masevhisi. Kana uine zvinodiwa kuti kukurumidza pcb kugadzira, tiri sarudzo yako yakanaka. Iwe unogona kuwana izvo zvaunoda maererano nekumhanyisa, kugona, mhando uye mutengo muno.
PCBFuture inonyanya kusimbiswa, yekutanga yemagetsi kambani kambani yekugadzira inopa PCB Assembly, PCB nhema, uye pcb turnkey masevhisi. Midziyo yedu, masisitimu uye maitiro akagadziridzwa kuti achinjike mukuvaka zvigadzirwa zvakaomarara zvine huwandu hwepakati / hwakanyanya musanganiswa zvinodiwa. PCBFuture yakanaka pakupa mhando Yakadhindwa Circuit Dhizaini uye Turnkey prototype uye mhinduro dzekugadzira kunharaunda yemagetsi.
Smart Controller Bhodhi Magetsi Masevhisi eGungano
Yakadhindwa Circuit Board Assembly, inozivikanwawo sePCBA, ndiyo nzira yekumisikidza akasiyana emagetsi zvigadzirwa paPBB. Dunhu redunhu usati waunganidza zvemagetsi zvinonzi PCB. Mushure mekunge zvigadzirwa zvemagetsi zvave kutengeswa, iyo bhodhi inonzi yakadhindwa wedunhu bhodhi gungano (PCBA). Iwo maratidziro kana nzira dzinoitisa dzakatemerwa mumahwendefa emhangura emamineti ePCB anoshandiswa mukati meiyo isiri-conductive substrate kuitira kuti vagadzire gungano. Kubatanidza zvigadzirwa zvemagetsi nemaPCB ndiko kuita kwekupedzisira usati washandisa mudziyo wemagetsi unoshanda zvizere.